Starlink Satellites Bvisa Wired Internet | TeraNews.net
Starlink satellite inopedza wired internet
Munyori Kravetz Pavel Yakabudiswa pa 21.03.2021
Wese munhu akaseka pfungwa yaElon Musk kuendesa satellite yeInternet pasirese Pasi achakurumidza kutora mazwi avo kumashure. Nechekare muBeta kuyedza, zvakave pachena kuti maStelllink satellites achakurumidza kubvisa iyo wired Internet Ehe, matekinoroji asina waya haazokwanise kukwikwidza ne optics. Asi maratidziro ekare emhangura anozotsiviwa nekukanya kamwe chete kweminwe.
Starlink satellites - tekinoroji yepakati yezana ramakore rechi21
Dambudziko rakakura nemataneti ese satellite ndeyekunonoka kuendesa mapakeji pakati penzvimbo uye anogamuchira chiratidzo. Viasat aionekwa semutungamiriri mukuita pamberi pe Starlink. Satellite Internet inogona kumhanyisa kusvika ku100 megabits pasekondi, asi nekunonoka kwe590-620 milliseconds.
Iine SpaceX satellites mune yepasi Earth obbit, iyo Starlink chirongwa chakakwanisa kudzikisa zvakanyanya izvi zvakashata-zvakashata zvekutaurirana kunonoka kusvika ku33ms. Vazhinji 3G uye 4G vanopa landline vanopa havana kutogadzirira kuburitsa mhedzisiro yakadaro. Uye pano - nzvimbo ma satellite. Rega kumhanya kwaElon Musk uchinamira pamazana mazana matatu megabits pasekondi. Asi mhinduro yacho inoshamisa.
Ndeapi mikana ye Starlink satellite Internet
Zvinangwa zvaElon Musk zvinoorora. MuAmerican philanthropist akatozivisa zviri pamutemo kurongeka kwe10 Gbps. Tichifunga nezve chokwadi chekuti bhirionari haakande mazwi kumhepo, iro basa richaitwa munguva pfupi iri kutevera.
Iye zvino pamutengo wemasevhisi. Seti yemidziyo yekuyedza Starlink satellite Internet yatovepo kutengeswa. Inogona kutengwa muUS neCanada ne $ 499. Iyo kit inosanganisira router, terminal uye yekumisikidza accessories. Mari yekubhadhara muNorth America iri $ 99 pamwedzi (chiteshi chisingagumi). Iyo sevhisi inowanikwawo muEngland - mitengo mumapondo: 439 uye 89, zvichiteerana.
10 vanyoreri vatove kutora chikamu mukuyedzwa kwe Starlink satellite Internet. Muchokwadi, aya akati wandei-epasi-anopa vanopa vakatorasikirwa nevatengi vakawanda. Uye nhamba iyi ichawedzera zvakanyanya. Munguva pfupi iri kutevera, pasirese, tichaona zvinokwaniswa nemuraraungu kubva kune vanopa vimbiso yekudzikisa vatengi vavo Zuva harisi kure apo rakamonyaniswa peya uye fiber optics ichadzokorora mugumo we landline nhare. Kana mutengo wacho wakakwana, pachagara paine mutengi.
Mifananidzo yeGoogle inowedzera mashandiro ebasa rayo
Viber, Teregiramu uye WhatsApp kudzora tsamba
Xiaomi Zuodu amburera inopetwa - chic inopa $ 20
Marii yaunoda kukwidziridza kuLGA 1700
Ungasarudza sei diagonal yeTV skrini
Computer mutambo CHUCHEL (Scarecrows)
18 chena Porsche 911 GT3 2015 makore pasina kumhanya
Mazita evarume vasina kutendeka munyika